June 30, 2021 - ApannPyay Media
ထိုင်းထီ ချဲလ် ၃ လုံး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု
July 1, 2021 June 30, 2021 by ApannPyay Media
သူဌေးလောင်းတို့အတွက် ထိုင်းထီ ချဲလ်(၃) လုံး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှု မကြည့်အားသေးရင် ရှယ်ထားကြနော် လောကီပညာကို လိုက်စားကြသော မြန်မာဆရာများ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာဆရာအချင်းချင်း ပညာကို ဖလှယ်သော အလေ့အထ ရှိတတ်ကြ၏ ထိုသို့ တစ်ဦးအား ပေးအပ်ကာ လဲလှယ်ကြရာ၌ ရှေးဦးစွ မိမိရှာဖွေတတ် သိထားသမျှ ပညာရပ်များတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် ကိုယ်တွေ့မှန်ကန်သော ပညာများကို သာပေးပါမည်… မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ၍ ပေးခဲ့မိလျှင် ယခုတတ်ထားသမျှ ပညာများလည်း ပျက်ကွက်၍ မဟာအဝီစိငရဲ၌ မကျွတ်တန်းခံရပါစေ ဟု ဆရာနှစ်ဦးစလုံး သစ္စာပြုပြီးမှကို ပညာဖလှယ်ကြ လေ့ရှိပါသည်… ယခုဖော်ပြလိုက် သောနည်းမှာ ၁၂၉၄ခုနှစ်လောက်က ပဲခူးမြို့သို့ရောက်စဉ် ယုံကြည်လောက်သော ပယောဂဆရာတစ်ဦးနှင့် စာရေးသူတို့ ပညာချင်း ဖလှယ်ကြရာမှ ရရှိခဲ့သောနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်…ဥုံ ရှင်သီဝလိ ဘုန်းရှိမြတ်စွာ ရဟန္တာထိပ်မှာမြတ်ဖျား … Read more
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီများရှင် ညွန့်ဝင်း ကွယ်လွန်
June 30, 2021 by ApannPyay Media
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီများရှင် ညွန့်ဝင်း ကွယ်လွန် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီများရှင် ညွန့်ဝင်း ဒီကနေ့ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ရွှေမန်းဇာတ်သဘင်တည်ထောင်သူ အင်္လကာကျော်စွာရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ သားဖြစ်သူ အကယ်ဒမီညွန့်ဝင်းဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ၈၁ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးညွန့်ဝင်းဟာအသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒါဂျီလင်တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခဲ့သလို ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် တို့မှာ ရေဒီယိုအီလက်ထရောနစ် ဘာသာရပ်ကို သင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီကန်စတိတ်တက္ကသိုလ် မှာ ဇာတ်ခုံအလင်းအမှောင်ပညာနဲ့ ဆက်တင်ဆိုင်ရာပညာတွေကို ၁ နှစ်ခန့် သင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီညွန့်ဝင်းရဲ့ ပထမဆုံး စတင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားဟာ မြဇော်ဖလင်က ထုတ်လုပ်တဲ့ သတို့သမီးအလိုရှိသည် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ညွန့်ဝင်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဇာတ်ကားမှာ ဗန်တိုလူလေးနှင့် သူဇာ … Read more
၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ
၇ လပိုင်းအတွက် ခုပြောပြပေးထားတဲ့ ယတြာလေးကို သေသေချာချာလိုက်လုပ်ကြပါ လုပ်ငန်းစီးပွား၊ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲ ငွေကြေးကံအညံ့ လာဘ်မရွှင်မှု ငွေကြေး လာဘ်တိတ်မှုတို့ကို သိသိသာသာ သက်သာစေပီး ငွေကြေး အခက်အခဲများ ပြေလည်ခြင်း ငွေကြေး ကံကောင်းခြင်း လာဘ်လာဘပေါများခြင်း လာဘ်ပွင့်ခြင်း အကျိုးအားကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ယတြာအတွက်လိုအပ်တာက လိမ္မော်သီး ၃ လုံး (လိ ၄ မ္မော် ၅) လဘ္ခက်ရည်ကြမ်း တစ်ခွက် (လ ၄ ဘ္ခက် ၅) လိမ္မော်သီး ၃ လုံးကို လင်ဗန်း (လင် ၄ ဗန်း ၅) တစ်ဗန်း ထဲထည့်ပီး မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာ ကပ်လှူပေးပါ… လင်ဗန်းက မရှိမှ အသစ်ဝယ်ပါ နေအိမ်သုံးလင်ဗန်းကို သုံးလို့လည်းရပါတယ်… ကပ်လှူရမယ့်အချိန်က … Read more
(၂၈) ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး
(၂၈) ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ဇ ၁၂၇၃၀၅ သိန်း ၁၀၀၀ ဆု ဆ ၂၀၄၇၄၂ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ စ. ၂၀၃၄၈ ဇ. ၁၉၇၃၃ ည ၉၅၂၂၀ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ ဆ ၇၁၄၈ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆုများ ည ၃၂၁ ည ၅၉၉ သိန်း ၅၀၀. က ၇၈၆၃၉၁ သိန်း ၅၀၀. ခ ၉၇၅၃၀၆ သိန်း ၅၀၀. ဇ ၁၉၂၃၇၄ မိုးယံ သိန်း ၅၀၀. ခ ၈၇၉၃၄၆. မိုးယံ … Read more
မြစ်ကြီးနားထောင်ကနေ လွတ်လာမယ့်ထဲ သမီးမပါလာ၍ဖခင်ဖြစ်သူ ရင်ကွဲနာကျပီးသေဆုံး
မြစ်ကြီးနားထောင်ကနေ လွတ်လာမယ့်ထဲ သမီးမပါလာ၍ဖခင်ဖြစ်သူ ရင်ကွဲနာကျပီးသေဆုံး ဒီနေ့မြစ်ကြီးနား ပျော်စရာ သတင်းများကြားရမလားလို့ စောင့်နေပေမယ့် မျှော်လင့်မထားတဲ့ ဝမ်းနည်းမှု က တစ်ပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်ယူကြုံးမရဖြစ်ရပြီ တောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းညီမလေး ရယ် ဒီနေ့လွှတ်တဲ့အထဲ သူ့သမီးလေးပါလေမလားဆိုပြီး ဖခင်တစ်ဦးရဲ့ သမီးလေးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လွမ်းဆွတ်မှုတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ထောင်ပေါက်ဝမှာ မနက်ကထဲက သွားစောင့် တာ ခုညနေထိ လွှတ်တဲ့အထဲပါမလာတော့ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ ယောကျာ်းတန်မဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ အသက်ပါ ပါသွားရရှာပြီ RIP ပါ ဦးလေး, ညီမလေးရေ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းအစ်ကိုတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါ့မယ် လို့ ကတိပေးပါတယ် ကွာ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် credit- Maran Seng Naw ျမစ္ႀကီးနားေထာင္ကေန လြတ္လာမယ့္ထဲ သမီးမပါလာ၍ဖခင္ျဖစ္သူ ရင္ကြဲနာက်ပီးေသဆုံး ဒီေန႔ျမစ္ႀကီးနား ေပ်ာ္စရာ သတင္းမ်ားၾကားရမလားလို႔ ေစာင့္ေနေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ … Read more
ကန်ဇွန်းရိုးနီပြုတ်ရည် သောက်ကြပါ အားတဲ့အချိန်…နေ့ နေ့ ည ညအချိန်မရွေးသောက်ကြပါနော် …..အသက်ငယ်ငယ် ကြီးကြီးရွယ်ရွယ်…..အားလုံးအတွက် အလွန်ကောင်းပါတယ် အသဲမှာရှိတဲ့အဆိပ် ….နှလုံးမှာရှိတဲ့အဆီ …..ကျောက်ကပ်မှာရှိတဲ့အနယ်တွေ …..အဆုတ်မှာရှိတဲ့ အပူတွေကိုငြိမ်းစေပြီး …..ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအားနည်းခြင်းအတွက် …..အထူးကောင်းမွန်ပါတယ် ….. အပူကြီးသူတွေ၊ ဝမ်းချုပ်ပြီးခေါင်းကိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ် …..ရေအစားပြုတ်ရေကို သောက်သုံးပေးပါကထူးကဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာပါ …..မန်ကျည်းသီး အနည်းငယ်ထည့်ပြီးပြုတ်ပါက ဝမ်းကိုက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ အသားပူ၊ အဖြူဆင်းခြင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ် …..မေတ္တာဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေသည် Molly crd ကန္ဇြန္းရိုးနီျပဳတ္ရည္ ေသာက္ၾကပါ အားတဲ့အခ်ိန္…ေန႔ ေန႔ ည ညအခ်ိန္မေရြးေသာက္ၾကပါေနာ္ …..အသက္ငယ္ငယ္ ႀကီးႀကီးရြယ္ရြယ္…..အားလုံးအတြက္ အလြန္ေကာင္းပါတယ္ အသဲမွာရွိတဲ့အဆိပ္ ….ႏွလုံးမွာရွိတဲ့အဆီ …..ေက်ာက္ကပ္မွာရွိတဲ့အနယ္ေတြ …..အဆုတ္မွာရွိတဲ့ အပူေတြကိုၿငိမ္းေစၿပီး …..ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီအားနည္းျခင္းအတြက္ …..အထူးေကာင္းမြန္ပါတယ္ ….. အပူႀကီးသူေတြ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ၿပီးေခါင္းကိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ အရမ္းေကာင္းပါတယ္ …..ေရအစားျပဳတ္ေရကို ေသာက္သုံးေပးပါကထူးကဲတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမွာပါ …..မန္က်ည္းသီး … Read more
ကျောက်ငရုတ်ဆုံ သုံးသူများ သတိထားဖို့
ကျောက်ငရုတ်ဆုံ သုံးသူများ သတိထားဖို့ အန္တရာယ် ရှိသော ကျောက်ငရုတ်ဆုံ မြို့မြို့တောတော အိမ်တိုင်း၏ မီးဖိုချောင်တွင်မရှိ၍မဖြစ်သော ငရုတ်ဆုံများမှာ ရှိနေတတ် ကြလေသည် ငရုတ်သီး အထောင်းများ၍လည်း ငရုတ်ဆုံဟုတွင်ကျယ်စွာခေါ်ဝေါ် ကြခြင်းဖြစ်သည် ခရမ်းချည်သီးခရမ်ခရမ်းသီး တို့ကိုလည်းငရုတ်ဆုံတွင်ထည့်ထောင်း၍ ငရုတ်သီးနှင့်ရောဖျော်၍ စားသုံး ကြပါသည်ဆူးပုတ်ရွက်ထောင်း ဟူ၍လည်း စားသုံးကြပါသည် ကျောက်ငရုတ်ဆုံ ကျောက်ကျည်ပွေ့ သံကျည်ပွေ့ တို့သည်အန္တရာယ်များကြောင်းကို သိသူရှားပါးမည် ဟုထင်ပါသည် မည်သည့် ဟင်းလျှာ အစားစား ကိုဖြစ်စေ ကျောက်ငရုတ်ဆုံထဲတွင် ကျောက်ကျည်ပွေ့ သံကျည်ပွေ့များဖြင့် ထည့်၍မထောင်းရပေ ကျမ်းမာရေးအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များလေသည် ကျောက်ငရုတ်ဆုံကို ကျောက်ကျည်ပွေ့သံကျည်ပွေ့များဖြင့်ထောင်းသည်ဖြစ်၍ အထောင်းခံရသော ကျောက်ငရုတ်ဆုံမှကျောက်မှုန့်များ ထွက်လာပါသည် ထိုကျောက်မှုန်များသည် ဟင်လျှာ အသီးအရွက်ေထာင်းများနှင့်ရောသမသွားကာစားသုံးသူများ၏ဝမ်းဗိုက် အတွင်းဆီသို့ရောက်သွားပါတော့သည် *အစာအိမ်ရောဂါ အသေအခြာခံရမည်မှာမလွဲတော့ပေ*တဦးတယောက်တွင် သာမက မိသားစုအားလုံးပါ အစာအိမ်ဝေဒနာခံကို … Read more
တင်းတိပ်ပျောက် ဆေးနည်းလေး အရမ်းလွယ်ကူပြီး တကယ်ပျောက်လို့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ် တင်းတိပ်ပျောက် ဆေးနည်းလေး အရမ်းလွယ်ကူပြီး တကယ်ပျောက်လို့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ် တင်းတိပ်ဆိုတာ မျက်နှာ အသားကို နေပူလောင်တာ၊မီးပူမိတာက စတာပါ မီးအပူနဲ့ ချက်ရ ၊ ပြုတ်ရတာတွေလည်းပါတာပေါ့” သုံးရမှာက အိမ်မှာ ငွေလည်းမကုန် ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတဲ့မီးဖိုချောင်ထဲက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေး ပစ္စည်း မကျည်းသီးမှည့် ပါဘဲ ။ ကျွန်တော် အဲဒီနည်းကို အမကြီးတွေ ၊ ညီမတွေကို … တင်းတိပ်ပျောက် ဆေးနည်းလေး အရမ်းလွယ်ကူပြီး တကယ်ပျောက်လို့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ် တင်းတိပ်ဆိုတာ မျက်နှာ အသားကို နေပူလောင်တာ၊မီးပူမိတာက စတာပါ မီးအပူနဲ့ ချက်ရ ၊ ပြုတ်ရတာတွေလည်းပါတာပေါ့” သုံးရမှာက အိမ်မှာ ငွေလည်းမကုန် ၊ … Read more
အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးပါ
အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးပါ ” ရောင်ပြန် ” ( ၁ ) တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ chattingမှာ ခင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းခဲ့တယ်။အဲဒီကောင်မလေးကို သူ မမြင်ဖူးသေးတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့သူ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ပြီး ၁ဝမိနစ် အကြာမှာသူ့ဟမ်းဖုန်းကို ဆက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဒါမှ သူ လစ်ထွက်လို့ အဆင်ပြေမယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေရာ ရောက်တော့ ကောင်မလေး ချောချော ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းမမြည်ပါစေနဲ့လို့ သူကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းက မြည်လာတယ်။၂မိနစ်လောက် စကားပြောပြီး ကောင်မလေးက သူ့ဖက်လှည့်ပြီး “ ဆောရီးနော်…အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ ရှိလို့ ကျွန်မကို သွားခွင့်ပြုပါဦး” … Read more
လွတ်ပြီလို့ အပိုင်ပြောနေသူတွေကို အာမချောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ
လွတ်ပြီလို့ အပိုင်ပြောနေသူတွေကို အာမချောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ ပြန်လွတ်မလွတ် မသေချာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူကို ရင်တထိတ်ထိတ်စောင့်မျှော်နေတာကြောင့် လွတ်ပြီလို့ အပိုင်ပြောနေသူတွေကို အာမချောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ ပြန်လွတ်မလွတ် မသေချာသေးတဲ့ မောင်ဖြစ်သူကို ရင်တထိတ်ထိတ်စောင့်မျှော်နေတာကြောင့် လွတ်ပြီလို့ အပိုင်ပြောနေသူတွေကို အာမချောင်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အစ်မ ယနေ့ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ အကျဉ်းသား (၂၀၀၀)ကျော်ခန့်ကို လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေက ထောင်ပေါက်ဝအရှေ့မှာ မနက်ကတည်းက သွားစောင့်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ မြစ်ကြီးနား၊ထားဝယ်၊လားရှိုးတို့မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကနေ ဖမ်းဆီးခံပြည်သူတစ်ချို့ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့မှာလွတ်မြောက်လာမယ့် ပြည်သူတွေထဲမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ … Read more